Ukuncancisa kunye nokuqaqanjelwa yingono
Unokuba neengono ezibuhlungu okanye ezithambileyo xa uqala ukuncancisa. Ukukhathazeka kwengono kuhlala kubangelwa kukungalunganga kunye nokubeka indawo. Emva kokuba ufumene isikhundla esisebenzayo kwaye umntwana wakho une-latch elungileyo, ukuncancisa kufanelekile. Akufanele ube neentlungu, i-blisters, okanye imivimbo xa uncelisa. Iingono zakho akufuneki ziqhekeze, ukhwekhwe okanye wophe. I-Engorgement nayo inokubangela ukukhathazeka kwengono.
Funa unonophelo kwangoko ukuba:
Elinye okanye omabini amabele akho abomvu, adumbile okanye aqinile, abuhlungu, kwaye uziva ushushu okanye ushushu.
Ingono yakho iphuma ubofu.
Ingono yakho ibomvu, yomile, iqhekekile, iyopha, okanye banamaxolo kuyo.
Uyabona okanye uziva isigaxa sethenda esifubeni sakho.
Lawula ukukhathazeka kwengono:
Faka amathontsi ambalwa obisi lwebele kwiingono zakho. Ubisi lwebele luyathuthuzela ngokwendalo. Musa ukunxiba iibras okanye iimpahla ezixineneyo kwaye ubeke uxinzelelo kwiingono zakho.
Hlamba iingono zakho ngamanzi ashushu kuphela. Sukusebenzisa iisepha ezinotywala okanye ezinye iikhemikhali. Ezi zinokuma kwaye zicaphukise iingono zakho. Sukusebenzisa iiphedi zokonga ezihonjiswe ngeplastiki. Vumela iingono zakho zome emva kokuba uhlambile okanye uncancisile. Nxiba iihempe ezikhululekileyo nezithambileyo zomqhaphu.
Buza umboneleli wakho wezononophelo lwempilo malunga nekhrim efanelekileyo okanye ioyile yakho. Guqula iipads zokonga rhoqo ukugcina ukufuma kude neengono zakho. Buza malunga namayeza ukunceda ukunciphisa iintlungu nokudumba.
Thintela ukudumba kwengono:
Nceda umntwana wakho afumane i-latch efanelekileyo. Yophula ngobunono ukutsala nokuma kwakhona ukuba umntwana wakho uncanca kwingono kuphela. Thetha kumcebisi we-lactation ukuba ufuna uncedo kwi-latch yomntwana wakho. Nika umntwana wakho ingono engacacanga kuqala. Ukutsalwa kosana lwakho kuhlala kunzima xa eqala ukuncancisa. Ukuncancisa amaxesha ama-8 ukuya kwali-12 ngosuku ngalunye. Ukuncancisa rhoqo kunokunceda ukunciphisa ukukhathazeka kwengono kunye nokuthintela ukubola.
Ukuncancisa okanye ukupompa rhoqo iiyure ezi-2 okanye ezi-3. Ukuncancisa rhoqo kunceda ukunciphisa ukuncipha kwengono kwi-engorgement. Veza okanye umpompe ubisi emabeleni akho phambi kokuba uncelise. Oku kuya kunceda ukuthambisa ibele lakho kunye nengono yakho, kwaye uvumele usana lwakho ukuba lubambe ngcono.
Guqula indawo rhoqo xa uncelisa. Oku kunokunceda ukugcina uxinzelelo kwiindawo ezibuhlungu.
Sebenzisa impompo yamabele ukuba kubuhlungu kakhulu ukuncancisa zide ziphilise iingono zakho.
Landela ugqirha wakho njengoko kuyalelwe:
IAmerican Academy yeZilwanyana
Ifowuni: 1- 800 - 433-9016
Idilesi yewebhu: http://www.aap.org
Nini ukufaka uphawu lokungalingani
Iipilisi ze-oxycodone ezingezizo ziyathengiswa
isetyenziselwa ntoni i-vancomycin
indlela yokuyila ileli
ngaphaya kwekhawuntari valium